विश्वभर का सेना सम्बन्धि खुल्यो रोचक तथ्य: विश्वका शक्तिशाली सेनाको सुचिमा नेपाल कति नम्बरमा? – ZoomNP
विश्वभर का सेना सम्बन्धि खुल्यो रोचक तथ्य: विश्वका शक्तिशाली सेनाको सुचिमा नेपाल कति नम्बरमा? प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक ०७, २०७३ समय - १६:०१:४७ काठमाडौं, ७ कात्तिक । सेनाको अध्ययन गर्ने संस्था ग्लोबल फायर पावरले सन् २०१६ का लागि संसारका सबैभन्दाशक्तिशाली सेनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालसहित कुल १२६ देशको सूची सार्वजनिक गरेको उक्त संस्थाका अनुसार नेपाली सेना ९८ औं स्थानमा रहेको छ भने अमेरिकी सेना शीर्ष स्थानमा रहेको छ । ९८ औं स्थानमा रहेको नेपाली सेनासँग ९५ हजार सैनिक रहेको छ । कुल रक्षा बजेट २१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । १८ वटा हेलिकिप्टर र १४८० फाइटर सवारी छन् ।
यस्तै दक्षिण एसियाबाट भारत चौथो स्थानमा परेको छ भने प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान शक्तिशाली सैन्य सूचीमा १३ औं नम्बरमा परेको छ । ६ लाख २० हजार सैनिक रहेको पाकिस्तानको ७ अर्ब रक्षा बजेट रहेको छ । २९२४ ट्यांक, २८२८ लडाकु विमान, ५२ एट्याक हेलिकप्टर, १२ युद्वपोत र ५ पानीजहाज छन् ।
सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः
यी हुन् शक्तिशाली सैन्य सूचीका १० राष्ट्रः
१. अमेरिकी आर्मी
विश्व शक्ति अमेरिका शक्तिशाली सैन्य भएको देशको शीर्ष स्थानमा परेको छ । ५८१ अर्ब डलर रक्षा बजेट रहेको अमेरिकी सेनासँग ८८४८ ट्यांक, २७८५ लड़ाकू विमान, १३ युद्वपोत, ९५७ एट्याक हेलिकप्टर र ७५ पानीजहाज छ । अमेरिकी सेनामा लगभग १४ लाख सैनिक कार्यरत छन् ।
रूसको आर्मी शक्तिशाली आर्मीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ । रुसको कुल रक्षा बजेट ४६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । रसियाली सेनासँग १५ हजार ३ सय ९८ ट्यांक, १४३८ लड़ाकू विमान, १ युद्वपोत, ४७८ एट्याक हेलिकप्टर र ६० पानीजहाज छन् । रसियाली सेनामा ७ लाखभन्दा बढी जवान संलग्न छन् ।
३. चिनियाँ आर्मी
शक्तिशाली सेनाको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा एसियाली मुलुक चीन परेको छ । १५५ अर्ब रक्षा बजेट रहेको चिनियाँ सेनासँग ९१८५ ट्यांक, ३१५८ लडाकु विमान १ युद्वपोत, २०० एट्याक हेलिकप्टर र ६८ पानीजहाज छन् । चिनियाँ सेनामा करिब २३ लाख सैनिक आवद्ध छन् ।
दक्षिण एसियाली महारथी भारत शक्तिशाली सेनाको सूचीमा चौथो नम्बरमा परेको छ । ग्लोबल फायरपावरले शक्तिशाली सेनाको सूचीको चौथो नम्बरमा राखेको भारतको कुल रक्षा बजेट ४० अर्ब अमेरिकी डलर छ । भारतीय सेनासँग ६४६४ ट्यांक, ८०९ लड़ाकू विमान, २ युद्वपोत, १९ एट्याक हेलिकप्टर र १४ पानीजहाज छन् । भारतीय सेनामा लगभग १४ लाख जवान आवद्ध छन् ।
फ्रान्सको सेना शक्तिशाली सेनाको लिस्टमा पाँचौ नम्बरमा आएको छ । ३५ अर्ब अमेरिकी डलर कुल रक्षा बजेट रहेको फ्रेन्च फ्रेन्च सेनासँग ४२३ ट्यांक, २८४ लड़ाकू विमान, ४ युद्वपोत, ४८ एट्याक हेलिकप्टर र १० पानीजहाज छ । फ्रेन्च सेनासँग लगभग २ लाख जवान छन् ।
ग्रेट ब्रिटेन शक्तिशाली आर्मीको लिस्टमा छैठौ स्थानमा छ । ग्लोबल फायरपावरका अनुसार ब्रिटेनको कुल रक्षा बजेट ५५ अर्ब डलर छ । ब्रिटिस सेनासँग ४०७ ट्यांक, १६८ फाइटर प्लेन, १ युद्धपोत, ४९ एट्याक हेलिकप्टर र १० पानीजहाज छन्। ब्रिटेनी सेनामा लगभग १ लाख ५० हजार सैनिक आवद्ध छन् ।
७. जापानिज आर्मी
एसियाली राष्ट्र जापान शक्तिशाली आर्मीको लिस्टमा ७ औं नम्बर परेको छ । जापान सरकारले रक्षाका लागि ४० अर्ब डलर छुट्टाएको हुन्छ । जापानी सेनासँग ६७८ ट्यांक, २८७ लड़ाकू विमान, ३ युद्वपोत, ११९ एट्याक हेलिकप्टर र ७ पानीजहाज छन् । जापानी सेनामा लगभग २ लाख ५० हजार सैनिक जवान छन् ।
८. टर्किस आर्मी
विश्वमा शक्तिशाली सेनाको आठौं नम्बरमा टर्कीको सेना आएको छ । यस देशको कुल रक्षा बजेट लगभग १८ अर्ब डलर छ । टर्कीस सेनासँग ३८७८ ट्यांक, २०७ लड़ाकू जहाज, ६४ एट्याक हेलिकप्टर र १३ पानीजहाज छन् । टर्कीस सेनामा लगभग ४ लाख सैनिक आवद्ध छन् ।
विश्वको शक्तिशाली सेनाको नवौ स्थानमा जर्मन सेना रहेको छ । जर्मनी सरकारले ८६ अर्ब डलर रक्षा बजेटमा छुटाएको छ । जर्मनी सेनाको साथमा ४०८ ट्यांक, १६९ लडाकु विमान, ४४ एट्याक हेलिकप्टर र ५ पानीजहाज छन् । जर्मन सेनामा लगभग १ लाख ८० हजार सैनिक कार्यरत छन् ।
१०. इटालियन आर्मी
इटालीको सेनालाई ग्लोबल फायरपावरले आफ्नो लिस्टको १० औं स्थानमा राखेको छ । ग्लोबल फायरपावर एजेन्सीका अनुसार इटलीको रक्षा बजेट ३४ अर्ब डलर छ । इटालीको सेनासँग ५८६ ट्यांक, १८५ लडाकु जहाज, २ युद्वपोत ५८ एट्याक हेलिकप्टर र ८ पानीजहाज छ । इटलीको सेनामा कुल ३ लाख २० हजार सैनिक छन् ।